Fa maninona ny olona no nijanona nanaraka ny marikao? | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 21, 2015 Zoma, Martsa 20, 2015 Douglas Karr
Iray amin'ireo infografika ankafizinay noforoninay sy navoakanay ny Maninona ny olona no manala anao amin'ny Twitter. Nahazo chuckle avy amin'izany ny Folks ary antenaina fa nahatonga azy ireo hamerina handinika ny paikadin'ny famoahana media sosialy mandritra izany fotoana izany.
Hilaza zavatra eto aho izay mety hahataitra ny olona sasany:
Tsy raharahako raha misy manara-dia ahy na tsy misoratra amin'ny mailako.
Reko ny fidradradradran'ny fahatezerana sy ny hatairana ankehitriny… ary tsy miraharaha an'izany koa aho. Marary aho ary reraky ny mpivarotra manenjika ny mason-doha fa tsy ny valiny. Ny ankamaroan'ny mpankafy, mpanaraka ary mpamandrika dia tsy misy ilana azy amin'ny orinasanao. Tsy midika izany fa tsy tokony hiraharaha an'io mpanatrika io ianao, fa milaza ny marina fotsiny aho. Ny isa dia fomba fanamarinana tsotra fotsiny ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa hitsara anao… tsy misy hafa.
Ary tsotra fotsiny satria nisy olona nisoratra anarana tsy midika hoe nanao zavatra ny marikao ratsy. Misy antony an'arivony maro mahatonga ny olona iray hanala ny fampiasa amin'ny alàlan'ny fantsona sosialy na ny mailakao. Angamba nandao ny orinasa izy ireo, angamba nasondrotra izy ireo, angamba niova ny andraikitr'izy ireo, angamba nieritreritra izy ireo fa ny marikao dia zavatra hafa tanteraka.
Ny fikolokoloana dia tsy fiasana amin'ny mpanara-dia na mpanjifa rehetra hividy. Ny fikolokoloana koa dia fotoana ahafahan'ny vinavina mahazo ny hevitry ny marikao ary hanapa-kevitra raha mety ianao na tsia. Ka… miala ny sasany.
Midika ve izany fa tsy misy zavatra ataonao handroahana azy ireo? Tsia mazava ho azy. Vao avy namaly tamin'ny mpiara-miasa iray aho tamin'ity herinandro ity ary nilaza taminy fa manitsakitsaka kely ny feony sy ny spam momba ny mailaka nomeny ahy izy. Tiako ho fantany fa nanery mafy izy ary nihemotra, raha tsy izany dia mety hamoy ahy izy. Avy eo indray, tsy mpanjifany lavorary aho ka angamba tsy tokony hihaino ahy izy!
Ny fanadihadiana dia nahatsikaritra fa 21% no tsy narahina noho ny atiny mankaleo, noho ny famoahana lahatsoratra be loatra ao amin'ny Facebook na famahanana mikorontana. Ny kely kokoa dia mety ho bebe kokoa… Ka diniho ny fatranao matetika amin'ny fampitahanao izany amin'ny hafa ao amin'ny sehatra misy anao na manaova andrana hampihenanao ny faharetany.
Efa im-betsaka aho no nilaza an'io, ny antony hihainoan'ny olona anao dia satria manome lanja azy ireo ianao. Manohy manome sanda ary hihazona ireo mpanaraka sy mpamandrika mifandraika amin'izany. Rehefa mandeha ny fotoana dia hanorina fahatokisana ianao ary hanaraka tsy ho ela ny fifamofoana. Fa ajanony ny fandohanao rehefa miala ny olona vitsivitsy… tsy maninona izany. Mandehana mitady izay tsara kokoa!
Fractl ary Buzzstream nanadihady mpampiasa media sosialy 900 hahalala ireo valiny ireo sy ny antony mahavery ny mpanaraka azy.
Tags: mitombo ny mpihainolisitry ny mpanjifa mitomboantony tsy fanarahan'ny olonaantony mahatonga ny olona tsy hisoratra anaranasarobidy